Mihetsika Hamonjy Ny Vakoka Ao Iran Ny Bilaogera Iraniana! · Global Voices teny Malagasy
Mihetsika Hamonjy Ny Vakoka Ao Iran Ny Bilaogera Iraniana!
Voadika ny 16 Jona 2017 4:26 GMT
(Marihina fa tamin'ny 6 Septambra 2005 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Namoaka ny ” Loza mitatao amin'ny Vakoka Iraniana avy amin'ny tohodrano” ny gazety Guardian tokony ho 8 volana lasa izay. Tao anatin'ity lahatsoratra ity no nahafantaran'ny Iraniana ireo toerana ara-bakoka “maherin'ny 100 izay manandanja indrindra kanefa tsinontsinoavina ao Iran, anisan'izany i Pasargades tanàndehibe naorin'ny Mpanjaka Cyrus, ilay Andrarezina, izay ho tratran'ny tondra-drano ao anatin'ny roa taona araka ny Firenena Mikambana, izay niantso ny mpahay siansa iraisampirenena omaly mba hiezaka handrakitra izay azony atao.
Hamotika ny lalan'ny amperora tao Persia fahiny izay miala avy ao Persepolis mankany Pasargadae” ny tondra-dranon'ny lohasaha Tang-e-Bolaghi mirefy telo ambin'ny folo kilaometatra noho ny fanorenana ny tohodrano.
Mialoha indray ny tranonkala , gazety na vondrona politika ao Iran rehetra ny bilaogera Iraniana amin'ny fanetsehana ny olona ao Iran sy izao tontolo izao. Nilaza i LogoMahi, izay nanome ny lohatenin'ny lahatsorany hoe “Pasargades ao Anaty Rano”, fa tsy maintsy mampahafantatra ny olona rehetra ny zava-mitranga voalohany indrindra aloha isika ary avy eo ho tonga ny hetsi-panoherana. Nilaza i Izadbanou, bilaogera iray hafa fa tsy misy olona manan-jo hanaisotra antsika amin'ny tantara. Nanome rohy ho an'ny fanangonan-tsonia manohitra ny tetikasan'ny tohodrano i Izadbanou .Efa olona maherin'ny 4000 no nanao sonia izany. Nilaza ny bilaogera iray hafa, Man Iraniam (midika hoe Iraniana aho ) fa midika ho fahafatesan'ny kolontsaintsika ny fahanginantsika manoloana ny zava-miseho.
Mitohy ny fanorenan'ny governemanta Iraniana ny tohodrano.